Southern African ministers meeting in South Africa have pledged to help Zimbabwe's reconstruction and plan to hold a special regional summit on the matter soon.
But the meeting's chairperson, South African Foreign Minister Nkosazana Dlamini-Zuma, cautioned that obtaining funds for the massive undertaking will take time.
"We are all, in SADC, determined to help Zimbabwe mobilize resources but I can't guarantee how much will be raised when. The economic environment globally, is difficult so we will do our best," said Dlamini-Zuma.
Zimbabwe's new unity government has proposed a $2 billion package aimed at reviving the economy, which has declined by 40 percent in the past 10 years, and restoring deteriorating infrastructure and public services.
There are reports of in-fighting between senior officials of ZANU-PF and Mr. Tsvangirai's Movement for Democratic Change, each of which controls about one-half of the Cabinet ministries.
South Africa's Dlamini-Zuma said SADC ministers had discussed these reports with the Zimbabwean delegates.